फिचर स्टोरी – Page 96 – Everest Dainik – News from Nepal
उथलपुथल जिन्दगी माइला लामाको
अनेक प्रश्नले एकसाथ झम्टे । म बन्दुकलाई प्रेम गर्ने मान्छे, गीत–संगीतमा खेल्ने मान्छे । आँखा नदेखेपछि म बन्दुक कसरी चलाउँला ? म कसरी युद्धमा जाउँला ? धेरै साथी सहिद भइसकेका छन्, मैले बदला लिनु थियो । जनता विजयीको पर्खाइमा थिए । अटेसमटेस आए प्रश्न
हेनान,चैत १२ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोआओ सम्मेलनलाई शनिबार विहान सम्बोधन गरेकान छन् । उक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न विहिबार ...
पुष्पा महरा२०७३, १० चैत्र बिहीबार
चार सय कर्मचारी छन्, छैनन् बालश्रमिक
पुष्पा महरा/ चारैतिर ठूल–ठूला घरहरु निर्माण भइसकेको अवस्थामा पनि यति ठूलो अनि फराकिलो ठाउँमा ईटा निर्माणकार्य भइरहेका थिए । उमेरले ३०/३५ वर्ष माथिका पाका महिला तथा पुरुषहरु मात्रै काम खटिएका देखिन्थे । टाढैबाट देखिने अग्लो तथा धुँवा नदेखिने चिम्नी आधुनिक थियो ।
गणेश प्रसाद बञ्जाडे२०७३, ८ चैत्र मंगलवार
कतारका नेपालीमा चुनावको उत्साह, फर्किन नसक्नेलाई विदेशबाटै भोट दिन पाउनुपर्ने माग
शान्ति स्थापना पछि स्थानीय चुनाव भइदिएको भए सायद गिता निश्चल तुल्सिपुर, दाङ्ग आज हाम्रो देश विकासले धेरै अघि फड्को मार्ने अवस्थामा पुगेको हुन्थ्यो । स्थानीय तहमा आएको बजेट चुहावट हुदैन थियो होला तर ढिलै भएपनी सरकारको आँखा खुलेको देखेर गर्व पनि लागेको छ । अब देश मा केही हुन्छ कि भन्ने आशाको जगाएको छ । जसरी स्थानीय तहको चुनावलाइ सरकारले सफल पार्न तीव्र तयारी पारेको छ, त्यसै गरि जनताले पनि साथ दिनुपर्छ । जहाँ सम्म प्रवासबाट स्थानीय चुनावमा जाने तयारीको कुरा छ, सम्भव भए सम्म चुनाव मा जानू पर्छ किन भने हाम्रो एक भोटको निकै महत्व हुन्छ । गाउँपालिका/ नगरपालिका चुनावमा भिजिनेवल र विकासशील मानिसलाई जिताउनुपर्छ ।
उपत्यकामा बढेको प्रदूषणबाट जोगिन युवाहरुले चलाए मास्क अभियान ! (फोटोफिचर)
काठमाडौं, चैत ६ । उनीहरुले शालिकलाई पनि मास्क लगाइदिए । हातमा मास्क बोकेका युवाहरु अाइतबार विहानै सिंहदरबारअगाडी रहेको पृथ्वीनारायण शाहको ...
जापानमा भयावह हुँदै ‘सेक्स संकट’, एकजना पनि नरहने चेतावनी
काठमाडौं, जापानमा यौनसम्बन्ध राख्ने कुरामा अरुची बढ्दै गएपछि यसले ठूलो संकट निम्त्याउने आँकलन गरिएको छ । यही स्थिति रहेमा एकदिन ...
अमरजित पुनमगर२०७३, २५ फाल्गुन बुधबार
नारी दिवसले छोएन महिलालाई
राेल्पा । आज १०७ औ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस, देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । मार्च ८ लाई विश्वभरका महिलाले ...
गोकर्ण भट्ट२०७३, २१ फाल्गुन शनिबार
अनौठो नाम, लोकप्रिय काम, कुराकानी फेसबुके “दारी ग्याङ”को
यही फागुन ७ मा समूहले आफ्नो वार्षिकोत्सव मनायो । नाम नै फरक, कसैले नसोचेको, झन समूहको परिचयमा पनि अलि फरक पहिचानको कुरा लेखिएको । “‘दारी ग्याङ’मा यहाँहरुलाई स्वागत छ !यो ग्रुप सबै दारी पाल्न मन पराउनेहरुका लागी हो !”
दुः ख सहेर यहाँ पुर्याए देशलाई : देशवासीका नाममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गरे, हेर्नुस सम्बोधनका दृश्यहरु
स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, १. सबैभन्दा पहिले म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्माणका लागि ...
किरण भट्टराई (रासस)२०७३, १५ फाल्गुन आईतवार
साउदीमा नेपालीका आँसुः काम पनि छैन, घर जान पनि पाइन्न
त्यहाँको प्रशासनलाई घुस खुवाएर भएपनि नेपाल फर्काइदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेर आफूहरुले प्रतिकामदार दुई हजार साउदी रियालका दरले १२ हजार उठाएर कम्पनीलाई दिएपनि पछि कम्पनीले नसकेको भन्दै उनीहरुको रकम फिर्ता दिएको थियो ।